Vokatry ny andro ratsy: tapaka ny lalana, miakatra ny rano, misy ny maty… | NewsMada
Fahatapan-dalana amin’ny faritra maro, indrindra amin’ny RN 4, ny RN 6, ny RN 13,…. Miakatra ny rano any amin’ny faritra avaratra andrefan’ny Nosy… Nisy mihitsy ny aina nafoy noho ny fihotsahana sy ny firodanana trano. Hiantraika mivantana any amin’ny toekarena sy ny sosialy izany, toy ny fidangan’ny vidin-javatra, ohatra.
Maro ny zavatra simba vokatry ny orambe tsy ankiato eto amintsika. Anisan’ny tena nisongadina ny fahapotehan’ny fotodrafitrasa, toy ny lalana sy ny fefiloha, ny tany na ny trano nihotsaka, ohatra. Santionany, tapaka tanteraka ny lalam-pirenena fahefatra (RN 4). Nihotsaka ny lalana any Anjiajia Maevatanàna, tototry ny tany fanindroany ny vahilava any Ankarafantsika (PK 480), tapaka ny lalana any Tanambao Andranolava satria safotry ny rano.
Any amin’ny lalam-pirenena fahenina (RN 6), mankany Antsiranana, tapaka ny lalana eo anelanelan’i Mampikony sy i Port-Bergé, toraka izany koa ny eo anelanelan’Ambilobe sy Ambanja satria safo-drano ny ampahan-dalana, vokatry ny fihotsanan’ny fantsona ao ambany lalana, any amin’ny PK 525+600.
Noho ireo antony ireo, mampandre ny tompon’andraiki-panjakana fa miato vonjimaika ny fitaterana sy ny fandehanana amin’ny lalam-pirenena RN 4 (Antananarivo-Mahajanga) sy ny RN 6 (Antananarivo-Antsiranana), nanomboka, omaly 22 janoary sy anio 23 janoary.
Ankoatra izany, simba koa ny lalam-pienena RN 13 (PK 114+800), mankany Betroka,
nihotsaka ny lalam-pirenena sy ny lalana vonjimaika.
Olona telo maty
Tao Anosikely avaratr’i Maevatanàna, renivohitr’i Betsiboka, namoy ny ainy ny mpianaka roa, nirodanan’ny trano biriky fonenany. Renim-pianakaviana ny iray, 32 taona, sy ny zanany vavy sahabo ho 12 taona, omaly. Nanazava ny zandarimaria any an- toerana fa “nirodana tampoka ny trano tokony ho tamin’ny 5 ora maraina ary nihotsaka noho ny hamandoana nateraky ny ora-nikija tsy ankiato izany. Telo mianaka izy ireo ny tao an-trano ary voa mafy tamin’izany ireo mpianaka roa vavy raha tsy naninona loatra kosa ilay ankizilahy 10 taona”.
Nifarimbona ny fokonolona eo an-toerana niaraka amin’ny zandary namonjy ireo niharam-boina. Nentin tany amin’ny hopitalibe CHRR Betsiboka izy ireo. Tsy tana intsony anefa ny ain’ireo mpianaka ary namoy ny ainy izy ireo vao tonga teny amin’ny toeram-pitsaboana, raha avotra soa aman-tsara kosa ilay ankizilahy. Ankoatra izay, hita omaly antoandro ny vata-mangatsiakan’ilay lehilahy saika niasa volamena ny talata maraina teo. Raha ny fanadihadiana natao, niampita ny ranon’Anjiajia ny lehilahy 36 taona no nentin’ny rano ka tsy hita intsony.
Njaka A. sy Henintsoa R.